Tavoahangy PLA ambongadiny any China Mpanamboatra sy mpamatsy | Copak
Ny tavoahangy plastika biodegradable Pla, antsoina hoe tavoahangin-tsiranoka azo tsoahina, dia natsangana niaraka tamin'ny PLA Plastika. Azo alaina amin'ny loko namboarina, habe, habe ary fanontana logo izy io. Anisan'ireo plastika rehetraTavoahangy PLA any Sina, Ity tavoahangy ity dia tontolo iainana, compostable biodegradable ary mangarahara. Ny tavoahangy PLA dia ampiasaina amin'ny famonosana zava-pisotro toy ny voankazo, ronono, legioma, dite, smothies sns.
Ny tavoahangy PLA an'ny COPAK dia ahitana sombin-tsakafo, mazava kokoa, maharitra maharitra, famoahana rano, vita pirinty manokana. Afaka manome ny filamatrao izahay Tavoahangy PLA any Sina ary manome antoka ny fifehezana kalitao sy ny vidin'ny fifaninanana. Tavoahangy PLA any Sina mahafeno fenitra henjana ho an'ny fonosana sakafo ary tsy misy fitaovana indostrialy na fitaovana azo averina, tsy misy poizina ary tsy misy tsirony, azontsika atao ihany koa ny manamboatra azy araka ny filanao ilaina.
Ny endri-javatra sy ny fampiharana ny tavoahangy plastika azo ovaina
Sakafo ara-tsakafo: fitaovan'ny PLA. Izy io dia azo antoka ho an'ny fonosana sakafo ary tsy manisy ratsy ny fahasalaman'ny olona. Ny atrikasa rehetra ataontsika dia misy kilasy sakafo sy tsy misy vovoka. Ny satroka sy fonon-tànantsika dia miasa rehefa manodina ny famokaranaTavoahangy PLA any Sina.
Sariaka ara-tontolo iainana: compostable Biodegrade. Rehefa may ny fitaovana dia tsy misy fofona sy rivotra hafa mandoto ny rivotra.
Samy hafa habe: afaka manome tavoahangy PLA manerana an'i Shina izahay. Hanampy amin'ny fampitahana ny kalitao sy ny vidiny amin'ireo mpamatsy rehetra izahayTavoahangy PLA any Sina.Koa isan-karazany ny habe sy ny volavola hita ao amin'ny COPAK.
Fanontana logo: Ekena ny famolavolana fanao fanontana logo tokana sy kanto. Hatramin'ny 6 ny loko tohanan'ny. Fomba tsara hanaovana dokambarotra ny marikao sy hampiroborobo ny vokatrao.
Teo aloha: Tavoahangy PLA
Manaraka: Mpanamboatra tavoahangy PLA